जसले करिब ३० करोड खर्च गरेर बचाए आफ्नो सन्तानलाई ! - Dainik Online Dainik Online
जसले करिब ३० करोड खर्च गरेर बचाए आफ्नो सन्तानलाई !
५ महिनाको उनको छोरा अर्थर मोर्गन , स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफी भन्ने समस्या बाट पीडित थिए । सामान्य त यो समस्याको उपचार नभएको नै मानिन्छ , स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफीले गर्दा २ वर्ष भित्र बिरामीको मृत्यु हुने गर्दछ । तर , संसारको सबभन्दा महँगो मानिएको खोपको एउटा डोजले उनलाई पुनर्जीवन दिएको छ ।
अर्थर जोलगेंस्मा थेरापी पाउने दुनियाँको पहिलो बच्चा बनेका छन् । जसको एक डोजको मूल्य १.७९ मिलियन पाउन्ड पर्दछ अर्थात् आजको मूल्य अनुसार २९,५४,७३,२६० रुपैयाँ ।
जोल्गेंस्मा संसारको सबैभन्दा महँगो औषधी मानिन्छ । जसको एक डोजले मात्र स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफीको बिरामीलाई उठ्न बस्न र चल्न सक्ने बनाउँछ । स्विट्जरल्यान्ड को नोटवारि फर्मा ले यसको उत्पादन गर्ने गर्दछ ।
डिसेम्बर २०२० मा जन्मेको अर्थरले ठिक ढङ्गले प्रतिक्रिया दिन नसकिरहेको देखिरहेका उनका अभिभावकले डक्टरकहाँ लिएर गएपछि यो समस्याको पहिचान भएको थियो । बच्चाका पिता रिस मोर्गनले आफ्नो बच्चा यो खोप पाउने पहिलो बच्चा भएकोमा अत्यन्तै खुसी प्रकट गरेका छन् ।
इङ्गल्यान्डमा प्रत्येक वर्ष ६५ जना बच्चामा यो समस्या देखिने गरेको छ । यो औषधीलाई एउटा क्रान्तिकारी औषधीको रूपमा चर्चा गरिन थालिएको छ ।